လုက်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးစေဖို့ – Gentleman Magazine
သင် တခြားအဖွဲ့ကိုပဲ ငှါးငှါး၊ ရုံးကြီးတစ်ရုံးကိုပဲ အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ် လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရမှာပါ။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ ချောဆီကောင်းကောင်းထည့်ထားတဲ့ စက်တစ်လုံးလို ချောချောမွေ့မွေ့ လည်ပါတ်နေမှာပါ။ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ပိုပြီးရင်းနှီးစေဖို့ လုပ်ရမယ့် အချက် ၇ ချက်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
သင်ပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင် သင့်လေသံအတိုင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးက လိုက်ပြောကြမှာပါ။ အကောင်းမြင်တတ်တာဟာ ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ဖြစ်စေပါတယ်။ သင် အကောင်းမြင်တတ်ရင် သင့်ရဲ့ ဝယ်ယူစားသုံးသူတွေကလဲ သင်နဲ့ပဲ လက်တွဲသွားချင်မှာပါ။
၂. အားလုံးကို လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပါ
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အမြင်ခြင်းကွဲပြားရင်တောင် လေးစားမှု ရှိသင့်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ခြင်းစီကို မရှိမဖြစ်လို သဘောထားကြည့်ပါ။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာကြီးအပေါ် သင်နဲ့ အမြင်မတူနိုင်ဘူးဆိုတာလဲ သတိရပါ။ သူတို့အမြင်ကို လေးစားခြင်းဟာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၃. သေသေချာချာ နားထောင်ပါ
ဆက်သွယ်မှု ကောင်းဖို့က အရင်ဆုံး နားထောင်တတ်ရမှာပါ။ သင့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ချပြဖို့ အားပေးပြီးတော့ သေသေချာချာ ဖြတ်မပြောပဲ နားထောင်ပေးပါ။ လူတိုင်းပြောရဲ ဆိုရဲ ရှိအောင် ” ဒါ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး” ဆိုတာထက် ” ဒါလဲ ကောင်းပါတယ် ” ဆိုတာ ပြောင်းသုံးပေးပါ။
၄. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဆင့်ထိ ဆက်ဆံပါ
သင့်ရဲ့ အလုပ်သမားတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေ ဝေမျှကြည့်ပါ။ သင် သူတို့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ ပြပါ။ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေအကြောင်း လေ့လာပါ။ အဲဒါဟာ ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့၊ နွေးထွေးတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကို တည်ထောင်လိုက်တာပါပဲ။
၅. အလုပ်အပြင်မှာလဲ ဆက်ဆံပါ
သင့် ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ နေ့လည်စာ တူတူစားပါ။ ဘောလုံးကန်ဖို့၊ ခြင်းခတ်ဖို့ ချိန်းတာမျိုးတွေ လုပ်ပါ။ ရုံးအပြင်မှာလဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိကျွမ်းနေပါစေ။ သင်တို့ ဝါသနာတူတာနဲ့ သင်နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအကြား သံယောဇဉ် ပိုကြီးလာပါလိမ့်မယ်။
၆. လူမှုရေးအလုပ် တူတူလုပ်ပါ
လူတွေဟာ တခြားတစ်ယောက်ကို ကူညီနေရရင် ပျော်တတ်ပါတယ်။ လူမှုရေးအသင်းတစ်ခုခုထောင်ပြီး သင့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ပါဝင်ခိုင်းပါ။ လူတွေကို အကျိုးပြုရလေလေ သင်တို့ပိုပြီး ရင်းနှီးလာလေလေပါ။ အါးလုံးက အလုပ်ကြိုးစားတဲ့အတွက် ဂုဏ်ပြုဆုတွေ ချီးမြှင့်ပါ။
၇. ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါ
ကျေးဇူးတင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဆုချတာ၊ ချီးမြှောက်တာ၊ လခတိုးပေးတာ၊ ဘောနပ်စ်ပေးတာ ပါတီခံတာ အားလုံးဟာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြတာပါပဲ။ အကောင်းမြင်ပေးပြီး ဝန်ထမ်းတွေ သာမန်ထက်ပို အလုပ်လုပ်ဆောင် ပြနိုင်တဲ့အခါမှာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို နွေးနွေးထွေးထွေး ပြောပါ။ လူသားတွေဟာ သူတို့ လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် ချီးကျူးခံချင်ကြပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လေးစားခင်မင်ခြင်းဟာ အများကြီး ပြန်ပြီး အကျိုးရှိစေမှာပါ။
သငျ တခွားအဖှဲ့ကိုပဲ ငှါးငှါး၊ ရုံးကွီးတဈရုံးကိုပဲ အုပျခြုပျအုပျခြုပျ လူတှနေဲ့ ဆကျဆံရမှာပါ။ တကယျလို့ သငျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ ဝနျထမျးတှနေဲ့ အဆငျပွပွေရေငျးရငျးနှီးနှီးဆကျဆံမယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ ကုမ်ပဏီဟာ ခြောဆီကောငျးကောငျးထညျ့ထားတဲ့ စကျတဈလုံးလို ခြောခြောမှမှေ့ေ့ လညျပါတျနမှောပါ။ သငျ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ ပိုပွီးရငျးနှီးစဖေို့ လုပျရမယျ့ အခကျြ ရ ခကျြကို ဖျောပွထားပါတယျ။
သငျပိုငျတဲ့ ကုမ်ပဏီမှာဆိုရငျ သငျ့လသေံအတိုငျး ကုမ်ပဏီတဈခုလုံးက လိုကျပွောကွမှာပါ။ အကောငျးမွငျတတျတာဟာ ပိုပွီး ပြျောစရာကောငျးတဲ့ လုပျငနျးခှငျ ဖွဈစပေါတယျ။ သငျ အကောငျးမွငျတတျရငျ သငျ့ရဲ့ ဝယျယူစားသုံးသူတှကေလဲ သငျနဲ့ပဲ လကျတှဲသှားခငျြမှာပါ။
၂. အားလုံးကို လေးလေးစားစား ဆကျဆံပါ
လုပျငနျးတဈခုမှာ အမွငျခွငျးကှဲပွားရငျတောငျ လေးစားမှု ရှိသငျ့ပါတယျ။ ဝနျထမျးတဈယောကျခွငျးစီကို မရှိမဖွဈလို သဘောထားကွညျ့ပါ။ သူတို့ဟာ ကမ်ဘာကွီးအပျေါ သငျနဲ့ အမွငျမတူနိုငျဘူးဆိုတာလဲ သတိရပါ။ သူတို့အမွငျကို လေးစားခွငျးဟာ ဝနျထမျးတှရေဲ့ ယုံကွညျမှုကို ရရှိနိုငျပါတယျ။
၃. သသေခြောခြာ နားထောငျပါ
ဆကျသှယျမှု ကောငျးဖို့က အရငျဆုံး နားထောငျတတျရမှာပါ။ သငျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို သူတို့ရဲ့ စိတျကူးစိတျသနျးတှေ ခပြွဖို့ အားပေးပွီးတော့ သသေခြောခြာ ဖွတျမပွောပဲ နားထောငျပေးပါ။ လူတိုငျးပွောရဲ ဆိုရဲ ရှိအောငျ ” ဒါ အလုပျမဖွဈပါဘူး” ဆိုတာထကျ ” ဒါလဲ ကောငျးပါတယျ ” ဆိုတာ ပွောငျးသုံးပေးပါ။
၄. ကိုယျရေးကိုယျတာအဆငျ့ထိ ဆကျဆံပါ
သငျ့ရဲ့ အလုပျသမားတှနေဲ့ ကိုယျပိုငျအမွငျတှေ ဝမြှေကွညျ့ပါ။ သငျ သူတို့ ကိုယျပိုငျဘဝတှကေို ဂရုစိုကျတယျဆိုတာ ပွပါ။ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတှနေဲ့ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတှအေကွောငျး လလေ့ာပါ။ အဲဒါဟာ ပိုပွီး ပြျောစရာကောငျးတဲ့၊ နှေးထှေးတဲ့ လုပျငနျးခှငျတဈခုကို တညျထောငျလိုကျတာပါပဲ။
၅. အလုပျအပွငျမှာလဲ ဆကျဆံပါ
သငျ့ ဝနျထမျးတှနေဲ့ နလေ့ညျစာ တူတူစားပါ။ ဘောလုံးကနျဖို့၊ ခွငျးခတျဖို့ ခြိနျးတာမြိုးတှေ လုပျပါ။ ရုံးအပွငျမှာလဲ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ သိကြှမျးနပေါစေ။ သငျတို့ ဝါသနာတူတာနဲ့ သငျနဲ့ ဝနျထမျးတှအေကွား သံယောဇဉျ ပိုကွီးလာပါလိမျ့မယျ။
၆. လူမှုရေးအလုပျ တူတူလုပျပါ
လူတှဟော တခွားတဈယောကျကို ကူညီနရေရငျ ပြျောတတျပါတယျ။ လူမှုရေးအသငျးတဈခုခုထောငျပွီး သငျ့ရဲ့ ဝနျထမျးတှကေို ပါဝငျခိုငျးပါ။ လူတှကေို အကြိုးပွုရလလေေ သငျတို့ပိုပွီး ရငျးနှီးလာလလေပေါ။ အါးလုံးက အလုပျကွိုးစားတဲ့အတှကျ ဂုဏျပွုဆုတှေ ခြီးမွှငျ့ပါ။
၇. ကြေးဇူးတငျကွောငျး ပွောပါ
ကြေးဇူးတငျဖို့ နညျးလမျးတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ဆုခတြာ၊ ခြီးမွှောကျတာ၊ လခတိုးပေးတာ၊ ဘောနပျဈပေးတာ ပါတီခံတာ အားလုံးဟာ ကြေးဇူးတငျကွောငျး ပွတာပါပဲ။ အကောငျးမွငျပေးပွီး ဝနျထမျးတှေ သာမနျထကျပို အလုပျလုပျဆောငျ ပွနိုငျတဲ့အခါမှာ ကြေးဇူးတငျကွောငျးကို နှေးနှေးထှေးထှေး ပွောပါ။ လူသားတှဟော သူတို့ လုပျခဲ့တာတှအေတှကျ ခြီးကြူးခံခငျြကွပါတယျ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး လေးစားခငျမငျခွငျးဟာ အမြားကွီး ပွနျပွီး အကြိုးရှိစမှောပါ။
Previous: လူပျိုများအတွက် ပလူးပလဲ ပိုးပန်းပုံအကြောင်း ၉ ချက်
Next: ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့